Home » Vaovao mpitsidika iraisam-pirenena » Vaovao momba ny dia any Arabia Saodita » Fiaramanidina sy COVID-19 any Arabia Saodita: Araka ny hitan'ny CEO jeneralin'ny flyadeal
Mba handehanan'ny fiaramanidina any Arabia Saodita, ny firenena dia tsy maintsy mamela mpitsidika bebe kokoa ary hanitatra ny fizahan-tany rehefa miatrika ny virus coronavirus.
Nanomboka niarahaba ireo mpizahatany vahiny ny fanjakan'ny Saudi Arabia tamin'ny septambra 2019 tamin'ny alàlan'ny fandefasana fitondrana visa vaovao ho an'ny firenena 49.
Ny hetahetan'ny printsy satriana satri Mohammad bin Salman dia ny hiala amin'ny toekarena miankina amin'ny solika ary hanao ny fizahan-tany ho andry fototra.
Ahoana ny fiasan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka manantona izany fanamby izany aorian'ny COVID-19.
Richard Maslen avy amin'ny CAPA Live dia niresaka tamin'i Con Korfiatis, tale jeneralin'ny sidina sidina fiaramanidina Saudia, sidina vaovao farany an'ny Moyen Orient monina any Jeddah, izay nanomboka tamin'ny taona 2017. Niresaka momba ny fanovana ny fifantohana ho an'ny firenena amin'ny fizahan-tany izy ireo, niatrika ny fanambin'ny COVID- 19, ary ny fomba ahafahan'ny zotram-piaramanidina tanora manampy ny firenena hahatratra ny tanjon'ny sidina. Ity manaraka ity dia ny fandikana ny dinika nifanaovan'izy ireo.
Tongasoa eto amin'ity tafatafa farany an'ny CEO an'ny airline ity ao anatin'ny andiany CAPA Live. Androany, hiresaka amin'i Con Korfiatis, tale jeneralin'ny flyadeal, seranam-piaramanidina Arabia Saodita izany dia ao anatin'ny vondrona Saudi Arabia. Con, tongasoa eto amin'ny CAPA Live.
Salama, manan-karena. Ahoana ny fahasalamana? Faly mahita anao indray.
Mety ny amiko. Misaotra anao. Noho izany, afaka 30 minitra ho avy, hiresaka kely momba ny fiaramanidina any Arabia Saodita isika. Ny firesahana ny fahitana an'i Arabia Saodita hanokafana bebe kokoa ny harinkarenany, hahafahan'ny mpitsidika bebe kokoa, ary hivily lalana fotsiny amin'ny sehatry ny solika sy loharanon-karena izay nananany teo aloha. Hiresaka kely amin'i Con momba ny flyadeal isika, ny fananganana azy, ny fomba nitomboany ary ny fiantraikan'ny COVID ny drafiny ary ny fomba hijereny ny ho avy raha vantany vao averina mitombo ny fitoniana iraisam-pirenena sy ny zotram-piaramanidina. Ka i Arabia Saodita dia firenena tena sarotra idirana, ary ferana amin'ny politika visa. SAINGY Ny fizahan-tany izao no andry manan-danja amin'ny paikadin'ny fanavaozana feno filoham-pirenena Prince Saudi Mohammad bin Salman hiala amin'ny toekarena miankina amin'ny solika.
Nanokatra varavarana ho an'ireo mpizahatany vahiny ny fanjakana tamin'ny volana septambra 2019 tamin'ny alàlan'ny fandefasana fitondrana visa vaovao ho an'ny firenena 49. Ary tiany ny sehatra mba hanome 10% ny harinkarena faobe ao aminy amin'ny 2030. Ireo dia dingana feno fahasahiana avy amin'ny tsena izay ananan'ny olona maro ny fomba fiheverana mialoha. Ka, Con, vao manomboka, tsara ho azy ny mandinika ny sahan-kevitra kely amin'ny fomba fiasan'ity rehetra ity. Vao maraina be talohan'ny nitrangan'ny COVID, saingy tsy maintsy nisy ny fambara fa manomboka mahita ianao raha misokatra ny tsena.
Marina tokoa. Fampidirana tsara, Manankarena. Jereo, fotoana tsy mampino eto, ary tena zava-dehibe ho ahy ny nahatongavako tany Arabia Saodita ary nijery ny fotoana manararaotra ary namelona azy io. Heveriko, araka ny voalazanao fa ny fanjakana dia nikatona somary nikatona, azo antoka fa nakatona tamin'ny fizahan-tany, nisokatra ho an'ny orinasa fa heveriko fa amin'ny fomba maody voafetra na angamba ny fahafaha-manao asa tsy teo tamin'ny fomba mitovy. Toekarena izay mifototra amin'ny loharanom-pahalalana, na dia misy aza izy io ary mbola manana andalana lava eo alohany. Izy io dia mijery teny lava kokoa ary miteny hoe: “Eny, tsy maninona, inona koa no mila ataontsika mba hananana fiainana maharitra?” Ary tena firenena tsy manan-karena amin'ny loharano ity, manankarena amin'ny zavatra maro hafa.
Izy io dia manana tranonkala sy toerana mahavariana mahavariana tokoa. Nahazo ranomasina mahafinaritra izy, manana tendrombohitra, manana faritra ao amin'ny firenena izay mahazo oram-panala Mino izany na tsia. Manana tranonkala tsindrin-tsakafo tsy mampino sy maritrano ary tantara ianao ao. Ary tena misy indostria hafa hitrandrahana koa. Manana vahoaka betsaka ianao. Izahay no manana mponina an-trano lehibe indrindra ao amin'ny GCC. Tena nahita fianarana sy mahay ary azo antoka indostria maro hafa no afaka miaina sy mandroso eto. Heveriko fa ireo vao maheno momba ny any ivelany dia tena fotodrafitrasa sy mifandraika amin'ny fizahan-tany, ary mahafinaritra izany satria mazava ho azy fa mila mamela ny olona ho afaka hijery sy hanao raharaham-barotra eto isika, na hiala sasatra eto na ho avy ho an'ny tanjona ara-pinoana. na antony hafa raha tsy misafidy ny ho avy ianao. Ary ireo fotoana ireo dia azo hararaotina.
Ataoko angamba fa talohan'ny COVID ny antony nahatonga ny «flyadeal» dia nahita toerana fotsy ho an'ny zotram-piaramanidina tena ambany ny Vondrona Saodiana. Ary holazaiko ny faritra, ny Moyen Orient dia somary mosary kely amin'ny karazan'ireo maodely lafo vidy hitanao fa be dia be ary namorona fidirana an-tsena lehibe toy izany tany amin'ny toerana toa an'i Eropa sy Amerika ary Azia Atsinanana ary manodidina ity faritra ity, mbola tsy betsaka. Ary tena fatra-paniry laza, mahery setra ary azo antoka fa mila fotodrafitrasa sy fitaterana mifanaraka amin'izany. Raha tsy izany dia tsy handefa karazana isa tian'izy ireo tratrarina mihitsy izy ireo amin'ny 2030.
Ka eto isika dia flyadeal izay nivadika telo tamin'ny septambra lasa teo, ka mbola zotram-piaramanidina tanora hatrany. Nidina avy tao anaty boaty izahay tamin'ny faran'ny '17, tamin'ny Andro Nasionaly rehefa nanomboka serivisy izahay ary nitombo haingana tamin'ny fiaramanidina Airbus 11ceo 320 vaovao. Nijanona kely izahay nanomboka tamin'izay, ampahany noho ny fiovan'ny karazana lalana tery tamin'ny taona19, izay nampihena ny fahafahanay naka fiaramanidina hafa haingana. Ary avy eo tamin'ny '20, izay nantenainay hitombo mahery vaika amin'ny resaka fitomboan'ny andian-tsambo sy ny toerana tsy nivoahany noho ny krizy iainantsika amin'izao fotoana izao. Ary mbola tsy tena azontsika antoka hoe rahoviana isika vao afaka tanteraka. Ka angamba hamintina fotsiny ny toerana tokony hahatongavantsika ao anatin'izay telo taona izay.
Ka anio rehefa mijoro miaraka amin'ny fiaramanidina 12 isika, nandray ny NEO voalohany tamin'ny taon-dasa, efa ho tonga 10 tapitrisa ny isan'ny mpandeha raha ny isan'ireo olona nentinay. Mbola mpandraharaha an-trano ihany izahay, saingy manana drafitra ny amin'ny maha-iraisam-pirenena antsika amin'ity taona ity. Ka ao an-trano ary tonga tamin'io fe-potoana io izahay ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka faharoa lehibe indrindra eto an-toerana, izay tena nandritra ny vanim-potoana naha-teo anay dia tena zava-bita tokoa. Ary porofo manamarina ny tsena fa tena vonona amin'ny vokatra lafo vidy marina sy ny fandraisan'ny besinimaro izany.
Tena mahaliana Con. Ary mazava ho azy, niresaka momba ny fitomboana lehibe ianao ary nijery tsara tokoa, mazava ho azy fa ny fiandohan'ny taona 2020 dia nahataitra ny olona rehetra, tsy nisy nanampo ny zava-nitranga. Inona no vokatr'izany teo aminao? Ary ahoana no niasan'i Arabia Saodita hitantanana ny fiparitahan'ny COVID?
Tsy mbola nisy ny boky filalaovana tantarain'ny zavatra niainantsika tamin'ny taona 2020, ary izao tontolo izao dia tsy maintsy nanao fanavaozana sy nifanaraka ary tena mailaka raha jerena ny loza atrehana amin'ny fomba fahaizanao… Eny, amin'ny maha-olombelona ahy, nefa koa amin'ny maha-olombelona ahy, ny jeografia sy ny orinasa ihany koa, tsy afa-bela noho ny amin'ny toerana hafa rehetra isika. Niditra amina fanidiana mihidy tanteraka izahay tamin'ny faran'ny volana martsa. Nanomboka izany dia voahidy hidina iraisam-pirenena. Izany no eritreritro momba ny herinandro fahatelo tamin'ny volana martsa ary tsy herinandro akory taty aoriana dia nikatona ihany koa isika. Noho izany, ny sidina rehetra niditra sy nivoaka ny fanjakana ary teto an-toerana tao amin'ilay fanjakana ary ny fitateram-bahoaka rehetra dia nijanona tamina fahombiazana nandritra ny alina, ary izany dia naharitra roa volana sy sasany teo an-toerana tao an-trano tamin'ny 31 Mey lasa teo dia navela hiverina teto an-toerana. Saingy talohan'ny nahatongavako tamin'io vanim-potoana io dia mieritreritra aho fa tao anatin'ny vanim-potoana fanidiana io dia tena henjana tokoa.
Ary nanana ora tsy ahafahan'ny olona mivezivezy mihoatra ny roa kilometatra miala ny toeran-trano izahay ary misy fepetra marobe hitanao tany amin'ny faritra maro eto an-tany. Nihetsika haingana sy haingana ary tamim-pitandremana ny fanjakana tamin'ny lafiny fepetra noraisina. Ary raha ny tena izy, heveriko fa ny vokatra goavambe sy ny statistikan'ny COVID ambany izay azontsika teto hatramin'ny taona lasa dia porofon'ireny fepetra ireny raha toa ka mety ho nahasosotra azy ireo tamin'ny fomba fijery sy ny fomba fijery hafa misy ny olona dia mpizaha tany be zotom-po tokoa eto, ohatra, ary hakatona tanteraka amin'ny zavatra vahiny be eto an-toerana, noho izany dia voatery nandalo io vanim-potoana io isika. Ara-dalàna, ny sidina an-toerana dia natomboka indray tamin'ny faran'ny volana Mey. Nanana fepetra COVID izahay, mbola manao an-tsambo ihany izahay. Amin'ny tranga maha mpiasan'ny vatana tery anay dia tsy mahazo mivarotra ny seza afovoany izahay ary amin'ny sidina feno vatana dia tsy afaka mivarotra seza eo akaikin'ny seza amidy izy ireo.
Ary noho izany, nisy ny fameperana an-tsambo. Mazava ho azy fa misy ny fepetra manodidina ny seranam-piaramanidina sy ny fomba fivezivezena sy alàlan'ny fizahana isan-karazany sy ny toy izany, ary tery ny seranam-piaramanidina. Nahazo namerina 20% ny matetika hatrany am-piandohana izahay ary nitombo tsikelikely izany. Noho izany, fampidirana miadana izy io, saingy ny nahagaga, ny hitantsika dia ny filan-tsakafo matanjaka be amin'ny dia an-trano. Niverina ny orinasa, mbola kivy ihany ny fifamoivoizana ara-pivavahana satria mbola nikatona ireo tranokala lehibe eto amin'ny lafin'ny firenena onenanay. Ka raharaham-barotra tany am-boalohany, nisy ny [tsy heno 00:08:42] niverina ary mahaliana ny fivoaran'ny raharaham-barotra fizahan-tany an-trano satria tsy afaka mivezivezy iraisam-pirenena ny olona. Ary mandroso haingana eo amin'ny herintaona eo ho eo izao dia miverina farafaharatsiny isika amin'ny tranga flyadeal mankany amin'ny 90% amin'ireo fahita matetika nataontsika teo aloha.
Ary hatramin'ny andro voalohany, dia tena tamin'ny alàlan'io fananganana io no feno ny sidinay. Navela hivarotra ireo seza dia nofenoinay, ary tsy izany fotsiny ny zavatra niainantsika, fa izany koa no traikefan'ny kaompaniam-pitaterana an'habakabaka an-toerana hafa. Tsena anatiny tena matanjaka izy io. Ary amin'ny tranga misy anay, voatahy izahay satria mpiasan'ny trano ihany no nialoha ny fanidiana. Tsy nanomboka nanao dia iraisam-pirenena izahay na nanana ampahany manan-danja amin'ny fiaramanidina natokana ho an'ny iraisam-pirenena. Noho izany, nahavita tsara be izahay tao anatin'ny tontolo tena sarotra, hatramin'ny nahatongavan'i flyadeal mpiasan'ny mpiasa feno nandritra ny krizy, nahatonga ny olona hiasa ary hanao ny asany foana ny olona rehetra. Ary izahay dia sambatra tokoa fa teo amin'ny tsena sy mpandraharaha ny haben'ny vitantsika nahavita izany, ka faly izahay. Manantena izahay fa hisy tovolahy mamirapiratra ho avy amin'ity taona ity, saingy somary aloha kokoa ny milaza.
United Airlines dia nanambara sidina vaovao avy any Boston Logan mankany London Heathrow
Tanzania dia namoaka ny foibem-panangonana COVID-19 tao amin'ny Serengeti National Park